सिकाइ सुधारका लागि अत्यावश्यक बन्दै ‘प्राक्टिस बुक’ – EducationPati – A complete news portal on Education in Nepal
सिकाइ सुधारका लागि अत्यावश्यक बन्दै ‘प्राक्टिस बुक’
काठमाडौं । चितवनस्थित भीमोदय माविले कक्षा ८ र १० मा सिकाइ सुधारका लागि गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयको प्राक्टिसबुक लागु गर्दै आएको छ । विद्यालयले ८ र १० मा डि.आर. सिंखडाको गणित विषयको प्राक्टिसबुकबाट अभ्यास गराउन शुरु गरेको दश बितिसकेको छ ।
पाठ्यपुस्तक पढाएको भरमा विद्यार्थी निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्, कितावमुखी नभएर विषयमुखी बनाउँदै ज्ञानको दायरा बढाउन प्राक्टिस बुक अत्यावश्यक रहेको प्रअ. आचार्य बताउँछन् । विद्यालयले सामाजिक, अनिवार्य र ऐच्छिक गणित, जनसंख्या तथा वातावरणलगायतका प्राक्टिसबुक तयार पारेको छ । कक्षा ३ देखि ५ सम्मका लागि पनि सामान्य ज्ञानको प्राक्टिस बुक तयार पारिएका छन् । विषयको गहिराइसम्म पुग्न, धेरै शिराबाट विषयलाई बुझ्न विद्यार्थीहरुका लागि प्राक्टिसबुक अत्यावश्यक रहेको प्रअ आचार्य दाबी गर्छन् ।
काठमाडौं त्रिपुरेश्वरस्थित विश्वनिकेतन माविका प्रअ हेरम्वराज कँडेल पनि विद्यार्थीलाई उत्कृष्ट बन्न र उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई अभ्यास गर्न प्राक्टिसबुक अपरिहार्य रहेको बताउँछन् । विद्यालयले गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयको विभिन्न प्राक्टिसबुकबाट अभ्यास गराउने गरेको भन्दै प्रअ कँडेल वल्ड इज गोल्ड र प्राक्टिसबुक विद्यार्थीहरुका लागि अत्यावश्यक रहेको तर्क गर्छन् ।
शहर र अलिक सुविधा भएका ठाउँमा त शिक्षक र विद्यार्थीले विभिन्न माध्यमबाट थप सिक्न र खोज्न सक्ने भएपनि दुर्गम स्थानहरुमा प्राक्टिस बुक विद्यार्थीका लागि ज्ञान बढाउन र परीक्षाको तयारी गर्नका लागि महत्वपूर्ण हुने बताउँछन् । प्राक्टिसबुक बाट अभ्यास गरेका विद्यार्थीको सिकाइ नगरेका विद्यार्थीको भन्दा केही बढी पाइएको उनले अनुभव सुनाए ।
यसरी शिक्षक र विद्यार्थीहरुले सिकाइ सुधारका लागि प्राक्टिस बुक अत्यावश्यक रहेको बताइरहँदा सरकारले भने प्राक्टिस बुक र ओल्ड इज गोल्ड(प्रश्नहरुको संगालो) मा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री विकास तथा वितरण निर्देशिका २०७६ मा यस्तो व्यवस्था गरेको हो । निर्देशिकाको परिच्छेद–९को पाठ्यसामग्री व्यवस्थापन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी व्यवस्थाको २५ को ६ मा यस्ता सामग्री विद्यार्थीका लागि प्रयोग गर्ने प्रयोजनका लागि स्वीकृत प्रदान नगरिने उल्लेख छ ।
सरकारले यो उमेरका विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तकबाहेकको ज्ञान बोझ हुन्छ भन्ने आशयले यो निर्णय गरेका भएपनि यो आशय पनि गलत हुने कोइरालाको भनाइ छ । फरक फरक तरिका र विधिअनुसार फरक स्रोतबाट ज्ञानलिने प्रचलन विश्वभरी रहेको भन्दै कोइरालाले पश्चिमा देशहरुमा एउटै विषय फरक फरक विद्यालयका शिक्षकहरुबाट लिनेदिने अभ्यास रहेको बताए । बन्द गर्ने होइन प्राक्टिसबुक अझै धेरै बनाउन दिनुपर्छ, यसका लागि शिक्षकहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भन्दै कोइरालाले सिक्ने ज्ञान लिने विषयमा अंकुश लगाउँदा त्यसले उल्टै नोक्सान गर्ने तर्क गरे ।
भीमोदय माविका प्रअ डा. कँडेल पनि सिकाइ सुधारका लागि क्याप्सुल जस्ता प्राक्टिसबुकलाई रोक लगाउन नहुने बताउँछन् । यसको संख्या उल्टै बढाउनुपर्ने भन्दै उनले गेस र गाइडसँग प्राक्टिस बुक र प्रश्नपत्रहरुको संगालोलाई दाज्न नहुने बताए ।
विश्वनिकेतन माविका प्रअ कँडेल प्राक्टिस बुकमा रोक लगाएर सरकारले शैक्षिक ज्ञानको बन्ध्याकरण गर्न खोजेको आरोप लगाए । सरकारले गरेको निर्णयलाई आलोकाँचो भन्दै प्रअ कँडेलले यस निर्णयले सामुदायिक विद्यालयको सिकाइलाई झनै साघुँर्याउने काम गर्ने तर्क गरे । माछापुछ्रे माविका प्रअ आचार्य पनि विद्यार्थीको अतिरिक्त सिकाइको बाटो बन्द गर्ने निर्णय शिक्षा मन्त्रालयले तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताउँछन् ।